မြန်မာတို့ အတွက် Malaysia's Smart Phone ပေါက်ဈေးများ
Smart Phones Age Are Bigger Than Before And Androids Would be Smarter Than Other..
Play Store သုံးမရလို့Screenshot ထဲ့မရသူများအတွက်
Fecebook ထဲက ကျနော့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Play Store မရှိလို့Screen Shot ဒေါင်းယူလို့ မရဖြစ်နေတာကူညီပါဆိုတာနဲ့ကျနော်ရဲ့ ဝက်ဆိုဒ်ထဲက ဒေါင်းယူပါလို့ ပြောပြီး URL ကို Facebook CB ကနေပို့ ပေးတာ ကိုဒေါင်းယူပြီးတော့ App ကိုရှာမရဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ သူ့ ရဲ့အားနည်းချက်က သူမှ မဟုပ်ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံ ဘလွတ်ရွှတ်သောက် လူတွေရဲ့ မြန်မာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ပေါင်းရေးတဲ့ အကျင့်ရယ် လူပျင်းများထုံးနှစ်လုံးမူပြီး စာကို အတိုကောက်ရေးကြတာတွေဟာ ကျနော့အတွက် မြန်မာတို့ ရဲ့
Posted by Than Naing at 8:36 AM No comments:
Root Asus Zenfone5ကို အောင်မြင်ခြင်းမှတ်တိုင်။
ကျနော် Asus Zenfone5ကို Root ဖေါက်ခ မလေးငွေ RM 40 တောင်းတာကို ပိုင်ရှင်က များတင်ထင်ပြီး ဈေးဆစ်လို့ကျတော်တစ်ပြားမှ မယူလိုက်ပါဘူး။ ဒီဖုန်းကို သူတို့ 
Posted by Than Naing at 9:56 PM No comments:
Play Store ရှိပြီးသုံးမရဖြစ်နေသော ဖုန်းများ ဒီနည်းလေးကို စမ်းကြည့်ကြပါ
Play Store ရှိပြီး သုံးလိုမရဖြစ်နေသော မိတ်ဆွေများ ဒီနည်းလေးကို သုံးကြည့်ကြပါ ပထမ သင့် ဖုန်းထဲက Setting ထဲမှာ Apps သို့ မဟုပ် Application Manager ထဲကိုဝင်ပါ ဘေးမှာ ပြထားတဲ့ ပုံက Lenovo A880 ထဲကပုံပါ။ Apps ထဲကို ဝင်ပြီးသွားရင် အောက်မှာ ပြထားပေးတဲ့ ပုံကို မြင်ရပါမယ်။
ဒီပုံထဲက Download ထဲမှာ Play Store ကိုတွေ့ နေရပေမဲ့ သင့်ဖုန်းမှာတော့ တွေရမှာ မထင်ဘူး ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့
Posted by Than Naing at 9:53 PM No comments:
ဖုန်းများအတွက် Play Store မှ သိမ်းယူထားသော Apps များ
Google Play Store ထဲမှာ တစ်ချို့Apps တွေ မရှိတော့ သုံးလိုသူများ အခက်ခဲလေးတွေ ဖြစ်တပ်လို့ကျွန်တော့ ဝက်ဆိုဒ်ထဲမှာ ထဲ့သိမ်းပေးထားတာပါ။
TubeMate APP ကိုသုံးပြီး အင်တာနက်ကနေ
Posted by Than Naing at 9:49 PM No comments:
Samsung S5 Mini အတု နှစ်းလုံးရဲ့ နှိုင်းရှင်ချက်။
ကျွန်တော် ဒီ Samsung S5 Mini Clone လေးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာ ရက်အတော်ကြာနေပါပြီ ဒီဖုန်းအကြောင်းပြုပြီးရေးဖြစ်နေတဲ့ Post တွေလဲ များလာပါပြီ ဒီနေ့ ထပ်တွေ့ တဲ့ သတင်းအချက်လက်လေးတွေကို ပုံနဲ့ တစ်ကွမြင်ရတော့
Posted by Than Naing at 5:58 PM No comments:
Xperia™ Z3 မိတ်ဆက်
Sony Xperia Z3 ကိုမြန်မာ မိတ်ဆွေများအတွက် မိတ်ဆက်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ အလိမ္မာစာမှာရှိသလို အမှန်တရားတွေ သစ္စာတရားတွေ ရှာဖွေခြင်တာကအစ စာသိကနေစလေ့လာရတာ မို့ လား။ ယနေ့ ဖုန်းလောကကြီးမှာ အစစ် ကို သုံးခြင်ရင်
Posted by Than Naing at 6:48 PM No comments:
ROM Manager ကိုအသုံးပြုနည်း
ROM Manager ကို Google Play Store မှ Download ရယူနိုင်ပါတယ် Free နဲ့ Premium နှစ်မျိုး ပေးထားပါတယ် ကျနော်ရှာဖွေနေတာ Root ဖေါက်နည်းပါ ခုရေးနေတဲ့ Post က ROM Manager အသုံးပြု နည်းဆိုတော့ တစ်ခြားစီများ ဖြစ်နေမလား လို့မစဉ်းစားမိကြဘူးလား မဖြစ်ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Root ဖေါက်ခြင်းရဲ့
လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ဗဟုသုတမျှဝေတာပါ ဖုန်းတစ်လုံးမှာပါလာတဲ့ ROM
Posted by Than Naing at 6:43 PM No comments:
Brick ဖြစ်သွားသောဖုန်းကို Flash ပြန်လုပ်နည်း
ဒီ Post လေးဟာဖုန်းလောကထဲ ကို စတင်ဝင်ရောက် လာသူတွေလေ့လာသင့်တဲ့ Post လေးဖြစ်ပါတယ် Brick ဖြစ်သွားတဲ့ ဖုန်းတွေကို ပြန်ပြီး Flashing လုပ်နည်းလေးပါ။ ဒီနည်းလေးကို သုံး ဖို့ ရန်တိကျတဲ့ Firmware တွေကိုသုံးဖို့ လိုပါတယ် ဒါမှသာ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ သုံးစားမရအောင်ဖြစ်သွားမဲ့ အနေထားကရှောင်နိုင်အောင်လို့ ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖုန်းတွေကို Flashing ဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်တဲ့နည်း နှစ်ခုရှိပါတယ်။
Posted by Than Naing at 6:37 PM No comments:
ROM တစ်ခု ကိုရှာ တော့မယ် ဆိုရင် ပထမ သိထားသင့်သည်များ
ဖုန်းတွေက အရန်းကို တူလွန်းနေသလား လို့တကယ်တော့ မတူတာကို ရှာဖွေသိရှိထားဖို့လိုပါတယ် အပ်ါပုံက အစစ်အတု ရှင်ပြပေးထားတာ တွေပါ သို့ သော် ကျ နော် ရှာနေတဲ့ အလုံး မဟုပ်ပါဘူး။ ကျနော်လူတပ်ကြီး ပုလင်းကွဲ ထိတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြချင်လို့ရယ် မိမိ လိုချင်တဲ့ ROM ကိုရှာဖို့သတင်းအချက်လက် ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြောဖြင်လို့ ပါ။ ကျနော် Samsung S5 Mini အတုတစ်လုံးကို
Posted by Than Naing at 6:30 PM No comments:
Viber မှာ စာလုံးမပါလာသည်များ ကို ပြင်နည်း
ကျနော် Viber ကိုသုံးတ လပိုင်းလောက်ဘဲ ရှိပါသေးတယ်။ fecebook မှာတွေဆုံကြရတဲ့ မိတ်ဆွေ မိန်းကလေးငယ် တစ်ချို့ က Viber သုံးရအောင်ပြောရာက စပြီးသုံးဖြစ်တာပါ။ ကျနော် လဲ Viber သုံးရော အဲဒီ facebook ထဲကကောင်မလေးတွေ နဲ့ 
စကားပြောဆိုရင်းနှီးလာတော့ ကျနော် အသက်နဲ့ရုပ်ကို အမှန်လဲ သိကြရော တစ်ယောက်မှ စကား မပြောကြတော့ဘူး ဟား ဟား ကျနော် အဲလောက် ရုပ် ချောပါတယ် ( ကြွားတာ )။
Posted by Than Naing at 6:27 PM No comments:
Lenovo A880 သည် Root ဖေါက်စရာ မလို
ကျနော် ဆင်းရဲသားပါဗျာကျနော်ဝက်ဆိုဒ်ရေးနေတာဟာ ဗဟုသုတမျှ ဝေချင်လို့ ရေးနေတာပါ ကျနော်ဝင်ဆိုဒ် ဟာ အပြု သဘောဆောင် ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဝက်ဆိုဒ်ရေးတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လို လူတွေ အတွက် ပညာကုသိုလ် မှ လွဲပြီး ဘာအကျိူးအမြတ်ကိုမှ မမျှော်လင့်ထားပါ ဘူး Lenovo A880 ဟာ
Posted by Than Naing at 1:38 AM No comments:
အားလုံးကိုတစ်ထေရာတည်း တူအောင်လုပ်ထားတာပါ။ ကျနော်ဝယ်လိုက်တဲ့ ဖုန်းကတော့ စမ်းတပ်မှု တွေ
Posted by Than Naing at 1:00 AM No comments:
www.play.google.com ဒီနေရာကသွားပါ။ Google Play Store ထဲမှာ သင်ယူလိုသော App
Posted by Than Naing at 7:51 PM No comments:
Without Computer ကွန်ပျူ တာမပါဘဲ Root ဖေါက်နည်း
နည်းပညာအကြောင်းကို ရောက်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖတ်ကြပါ ကျ နော့ ဝက်ဆိုဒ်ထဲ မှာ ရောင်းရန် ကြော်ငြာထား သော Lenovo A680 နှစ်လုံး ကို တစ်နေ့တစ်လုံးနှုံးရောင်းခဲ့ ရပါတယ် ပထမတစ်လုံးကို ဝယ်သွားသူက " ရင်ခွင်လမ်းလေးထဲမှာ " ဝက်ဆိုဒ်ကိုရေးနေသူ ကျနော့သူငယ်ချင်း ကိုကျော်ကြီး က
ဝယ်သွားတာပါ ကိုကျော်ကြီးဆီကို အသွား မနက်ပိုင်းမှာ
Posted by Than Naing at 7:50 PM No comments:
iPhone5ကို Unlock လုပ်နည်း Videl File
iPhone 5S ကို Unlock လုပ်နည်း Video File ကိုလေ့လာရမဲ့ အကြောင်းလေး ပေါ်လာလို့လေ့လာရင်း မိတ်ဆွေများကို လည်း မျှ ဝေလိုတာကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါ ဒီဝက်ဆိုဒ်ကို အမြန်ရေးနေရတာမို့အသေးစိတ်ကို တော့ နောင် အလျှင်း သင့်ရင် သင့်သလိုတင်ပေးပါအုန်းမယ် ခုတော့ Video ကို့ ကြီးလိုက်လုပ်ကြည့်ကြပါလို့အကြံပေးပရစေ။
ဒီ Video File ကို YouTube ကနေ မပြောမဆိုယူလာတာဖြစ်ပါတယ်။
iPhone Unlock PDF File တစ်ခုကိုလည်း စာဖတ်ပြီး လုပ်ကြည့်လိုသူများအတွက် တင်ပေးထားပါတယ် ဒေါင်းယူကြပါ ဒီ Link မှာ ကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်ထပ် iPhone နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ Video File တစ်ခုကိုလည်း လိုရမယ်ရ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် သိတဲ့အတိုင်း YouTube က နေ မပြောမဆို ယူလာတာလေးပါ။
Posted by Than Naing at 7:09 PM No comments:
ကျနော်ရေးနေသော ဝက်ဆိုဒ်များ
မြန်မာတို့ အတွက် ဗဟုသုတ ဝက်ဆိုဒ်
အနတ္တ စင်္ကြာ ဝဋ္ဌာ ထဲမှ အတ္တသမား ရဲ့ ပေါက်ကွဲမှု ရသများ
မြန်မာ တို့ အတွက် Guitar ဗဟုသုတများ
ပြောချင်တာ ကိုဒီမှာ ပြောခဲ့
၃ နိုင်ငံ စံတော်ချိန်
မြန်မာ မလေးရှား ထိုင်း
Play Store သုံးမရလို့Screenshot ထဲ့မရသူများအတွက...
Play Store ရှိပြီးသုံးမရဖြစ်နေသော ဖုန်းများ ဒီနည်...
ဖုန်းများအတွက် Play Store မှ သိမ်းယူထားသော Apps မ...